WajigaHore – Wasaarada Waxbarashada , Hiddaha & Tacliinta Sare
Archive by category "WajigaHore"
Wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in wasaaradda ay wado qorshe lagu dhisayo guddiga tacliinta sare ee dalka.
Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in guddigan ay dib u habeyn ku sameyn doonaan tayada waxbarashada jaamacaddaha dalka, si loo ogaado tayadooda.
“Wasaaradda waxbarashada waxay qorsheyneysa in la sameeyo guddiga tacliinta sare ee dalka si dib u habeyn loogu sameeyo waxbarashada jaamacadaha dalka, islamarkana loo ogaado tayadooda”ayuu yiri wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulahi Goodax Barre oo ka qeyb galayay barnaamijka kulanka todobaadka ee warbaahinta dowladda.
Wasiirka waxbarashada dalka Cabdulahi Goodax Barre ayaa tilmaamay in sannadka 2020-ka ay ku rajo weyn yihiin in jaamacadda Ummadda ay awood u yeelato in sannad kasta ay qaato 10.000 kun oo ardey.
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan la soo wareegtay 24 iskuul oo ku yaalla gobolka Banaadir kuwaasoo hadda si lacag la’aan ay wax uga bartan ardey Soomaaliyeed.
Sidoo kale wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa diyaarisay islamarkana qeybisay manhajka cusub ee fasalada koowaad ilaa afaraad.
Wasiirka waxbarashada Mudane Cabdulahi Goodax Barre oo la kulmay guddiga tacliinta sare ee Turkiga
Wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa maagalada Ankara ee dalka Turkiga kulan kula qaatay guddiga tacliinta saree Turkiga.
Kulanka ayaa looga hadlay horumarinta waxbarashada, iyo siddii guddiga tacliinta sare ee Turkiga ay kaalin uga geysan lahayeen tababarida macalimiinta Soomaaliyeed.
Danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Turkiga Jaamac Cabdullahi Maxamed Caydiid iyo u qaybsanaha waxbarashada ee safaaradda Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan ayaa goob joog ka ahaa kulanka.
Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa tilmaamay in guddiga ay ka wada hadleen siddii ay door muhiim ah uga qaadan lahayeen horumarinta waxbarashada dalka iyo tababarka macalimiinta.
“Magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxaan kulan kula qaatay guddiga tacliinta sare ee dalka Turkiga, waxaan ka wada hadalnay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta waxbarashada.,sidoo kale waxaan ka wada hadalnay siddii guddoonka YOK ay door muhiim ah uga qaadan lahayeen tababarida macalimiinta dugsiyada sare ,dugsiga sare ee farsamada gacanta , korantada ,xanaanada xoolaha ,beeraha iyo kaluumaysiga”ayuu yiri wasiirka waxbarashada Mudane Cabdulahi Goodax Barre.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta Sare Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in wasaaradda ay dadaal ugu jirto siddii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada dalka.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre oo shir uga qeyb galay dalka Morocco
Wasiirka wasaaradda waxbarshada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulaahi Goodax Bare ayaa magaaladda Rabat ee dalka Morocco ka qeyb galay shir ay iskugu yimaadeen wasiirada waxbarashada dalalka ku jira hay’adda Islamic Educational Scientific and Cultural Organization (ISESCO).
Kulankan ayaa looga hadlay sidii wasiirada waxbarashada dalalkan ay iskaga kaashan lahayeen arrimaha waxbarashada.
Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in wasiirada uu kulanka la qaatay uu kala hadlay sidii door muhiim ah uga qaadan lahayeen horumarinta waxbarashada Soomaaliya.
“Dhamaan wasiirada waxbarashada dalalka ku jira hay,adda Islaamic Educational scientific and Cultural Organization [ISESCO] waxaan ka wada hadalnay sidii kaalin mug leh uga qaadan lahayeen horumarinta waxbarashada Soomaaliya, waana isku afgarnay “ayuu yiri wasiirada waxbarashada Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre.
Wasaaradda waxbarashada dalka ayaa dhawaan ku guuleystay inay hirgeliso manhajka cusub ee wasaaradda ay soo diyaarisay iyadoo loo qeybiyay iskuulladii dhawaan ay la soo wareegtay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya.
Mudane Cabdulahi Goodax Barre wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa dadaal ugu jira sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka.
Wasaaradda Waxbarashada oo sagootisay dhalinyaro deeq waxbarasho ka heley Itoobiya+sawirro
Munaasabada lagu sagootinayay 20 dhalinyaro ah oo ka kala socday ha,adaha dowladda qeybahoda ,deeqaha wax barasho ka helay dalka itoobiya ee aan dariska nahay,waxaa ka qeyb galay masuuliyiin ka socatay wasaaradda waxbarshada Hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya iyo
Danjiraha dowladda Itobiya u fadhiya Soomaaliya Jamaalo diin Mustafa,iyo marti sharaf kale oo lagu casumay.
Lataliyaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ismaaciil yuusuf Cismaan ayaa dar daaran u jeediyaya ardayda deeqaha waxbarsho kahelay dalka itobiya in ay ku dadaalaan hamigooda ah in ay waxbartaan.
Danjiraha dowladda itoobiya u fadhiya Soomaaliya Jamaalo diin Mustafa ayaa kahadlay xariirka ka dhaxeya Soomaaliya iyo itoobiya,
waxaa barnaamijkan barbar socda sanadkasta minxada waxbarasho ee aan siino Soomaaliya,Bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya sanadkan 190 ayaa siinay todobaadkan ayuu dhamaandoonaa”. Ayuu yiri Danjire Jamaaludiin Mustafa.
Wasiiru doowlaha wasaaradda waxbarshada Hiddaha iyo tacliinta sare C/raxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir ayaa ugu mahad celiyay Dowladda itoobiya iyo shacabka itoobiya soo dhaweynta ay markasta la garab taaganyihiin dhalinyarta Soomaaliyeed,
Muhiimadda aan ka leenahay in aan hormarino dhalinyarteena waa midda kaliya ee aan u noolnahay taabo kasta ee aan waan u qaadeynaa dhanka waxbarshada waa ,waajib naga saran in dadkeena ay wax bartaan, marka waxaan rajeynaynaa in ardayda kale ay ka imaan doonaan dowlad goboleedyada.
Wasaaradda waxbarashadda Hidddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa wadda dar dar galinta hormarinta waxbarshadda dalka,
RW kheyre oo maanta iskuulka Jabuuti ka qeybiyay bugaagta manhajka cusub.
Ra’iisul wasaaraha xukuummadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta kormeer ku tagay iskuulka Jabuuti oo ka mid ah iskuulladii dhawaan ay la soo wareegtay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Kormeerkan ayaa waxaa ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ku wehelinayay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ardeyda iskuulka u qeybiyay bugaagta ay ku qoran yihiin manhajka cusub ee ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada.
Xassan Cali Kheyre ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka go’an tahay horumarinta waxbarashada dalka.
“Dowladda federaalka waxaa ka go’an inay horumariso waxbarashada dalka waxaan idin ku dhiiri gelinaya inaad wax bartan”ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre.
Wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan bilowday bixinta bugaagta manhajka cusub, iyadoo maanta la soo gaba gabeeyay.
Wasiirka waxbarashada XFS oo kulan sagootin ah u sameeyay danjirihii hore ee Suudaan u fadhiyay Soomaaliya
Wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa maanta kulan sagootin ah u sameeyay danjirihii dowladda Suudaan u fadhiyay Soomaaliya Maxamed Yuusuf Ibraahim.
“Maanta waxaan kulan sagootin ah ugu sameeyay danjirihii hore ee dowladda Suudaan u fadhiyay Soomaaliya Ambasador. Maxamed Yuusuf Ibraahim, waxaan ka wada hadalnay, xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dalka, dowladda Suudaan waxay ka mid tahay dalalka deeqaha waxbarasho siiya dalkeenna, hadda waxaa jaamacadaha Suudaan wax ka dhigta ardey badan oo Soomaaliyeed”ayuu yiri wasiirka waxbarashada Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre.
Wasaaradda waxbarashada XFS oo la soo wareegta 24 iskuul;
Munaasabad ku saabsan ololaha dib u soo nooleynta waxbarashada dadweynaha ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo Wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kula wareegtay 24 iskuul oo ku yaalla gobolka Banaadir.
Munaasabaddan ayaa waxaa ka qeyb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulahi Farmaajo, wasiirka waxbarashada Mudane Cabdulahi Goodax Barre, Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarshada feysal cumar guuleed,wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxman Maxamuud Cabdulle, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Xassan Maxamed Cali, xubno ka socda bahda waxbarashada, iyo marti sharaf kale.
Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in maanta wasaaradda ay ku guuleystay inay la soo wareegto 24 iskuul oo ku yaalla gobolka Banaadir islamarkana maanta wixii ka dambeeya wasaaradda ay qaadeyso masuuliyadooda.
“Maanta waxaan ku guuleysanay inaan la soo wareegno 24 iskuul oo ku yalla gobolka Banaadir, maanta wixi ka dambeeya, waxaa masuuliyadooda qaadeysa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa tilmaamay in marna aan la iloobi doonin doorkii dalladaha waxbarashada ay ka soo qaateen intii lagu guda jiray bur burka horumarinta waxbarashada.
Iskuullada maanta wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ay la wareegay ayaa kala ah Kaaraan, Godey, Cabdi casiis, Gaashaanle, 11 janaayo, Bartamaha, Wiil waal, Bartanaha, Yaasiin cismaan, Agoonta Boondheere, Maxamuud mire, Hanti wadaag, Howlawadaag, Xasan khaliidi, Cali xuseen, Jabuuti, Deyniile, Maxamuud Hilowle, Axmed waayeel, Ex aqoon darsed, 21 November, 20 December, Agoonta wiilasha kaaran, Macalin jaamac.
“Ahmiyadda koowaad waxaa noo ah horumarinta waxbarashada, manhajka waxbarashada waa in lagu soo dara wadaniyadda, iyo muhiimada uu lee yahay qofka “ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulahi Farmaajo iyo wasiirka waxbarashada Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa ardeyda ku sugneyd munaasabada guddoonsiyay Bugaag ay ku qoran yihiin manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada ay diyaarisay.
Wasiirka waxbarashada XFS oo hogaanka dalladaha waxbarashada kala hadlay Hirgelinta manhajka cusub
Wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa maanta xafiiskiisa magaalada Muqdisho ku qaabilay hogaanka dalladaha waxbarashada dalka.